अल्ज़ारी जोसेफले बनाए आईपिएलमा नयाँ रेकर्ड ! खेलमा मुम्बईद्रारा हैदराबाद पराजित – onlinekhelkhabar.com
अल्ज़ारी जोसेफले बनाए आईपिएलमा नयाँ रेकर्ड ! खेलमा मुम्बईद्रारा हैदराबाद पराजित
चैत्र २४ , अनलाईन खेलखबर ।। ईण्डियन प्रिमियर लिग ( आईपिएल ) अन्तर्गत सनिवार राती सम्पन्न प्रतियोगिताको १९ औं खेलमा सनराइजर्स हैदराबाद माथि मुम्बई ईण्डियनले ४० रनले जित हासिल गरेको छ ।
खेलमा मुम्बई ईण्डियनले दिएको १ सय ३७ रनको औषत बिजयी लक्ष्य पछ्याउदै जवाफी ब्याटिङ्ग गरेको हैदराबाद १७.४ ओवरमा अलआउट हुदै मात्र ९६ रनमा सिमित भएपछी टिम निराश हुन् पुग्यो ।
झिनो लक्ष्य पछ्याएर जवाफी ब्याटिङ्ग गरेको भएपनि टिमका लागि कुनै ब्याट्सम्यानले सन्तोषजनक योगदान दिन नसक्दा टिम पराजित हुन् पुग्यो ।
हैदराबादका लागि दिपक होन्डा सर्बाधिक २० रनको योगदान गरेका थिए । २४ बलको सामना गरेका उनले १ चौका समेत प्रहार गरे । यस्तै टिमका लागि डेबिट वार्नरले १५ तथा मनिष पाण्डे र जॉनी बेयरस्टोले समान १६/१६ रन बनाएका थिए ।
यता बलिङ्ग तर्फ मुम्बई ईण्डियनका लागि डेब्यु खेलमै सनसनिपूर्ण बलिङ्ग गर्दै अल्ज़ारी जोसेफ एक्लैले ६ विकेट चटकाए पछि टिमले हैदराबाद माथि जित निकाल्न सफल भयो । खेलको प्लेयर अफ द म्याच समेत घोषित भएका उनले उत्कृष्ट बलिङ्ग गर्ने क्रममा ३.४ ओवर मात्र बलिङ्ग गरेका उनले १ ओवर मेडन राख्दै १२ रन खर्चिएर उक्त विकेट लिएका थिए ।
यो आईपिएलको ईतिहासमा सबैभन्दा उच्चकोटीको बलिङ्गका लागि किर्तिमान दर्ता भएको छ । यसअघि सोहैल तनवीरले राजस्थानका लागि यो किर्तिमान कायम गरेका थिए । उनले सन् २००८ मा उत्कृष्ट बलिङ्ग गर्ने क्रममा एकै ईनिङ्गमा १४ रन खर्चिएर ६ विकेट लिएका थिए ।
यस्तै मुम्बईका लागि राहुल चाहरले पनि २ विकेट हात पार्दा जेसन बेहरेनडोर्फ र जसप्रीत बुमराहले पनि समान १/१ विकेट लिएका थिए ।
यसअघि राजीव गान्धी अन्तराष्टिय रङ्गशाला, हैदराबादमा टस जितेर घरेलु टोलि हैदराबादले मुम्बई ईण्डियनलाई पहिले ब्याटिंङ्गको निम्तो दिएको थियो ।
जसअनुसार मुम्बई ईण्डियनले निर्धारित २० ओवर पुरै खेल्दै ७ विकेटको क्षतिमा १ सय ३६ रनको औषत योगफल खडा गरेको थियो ।
मुम्बई ईण्डियनका लागि किरन किरोन पोलार्डले सर्बाधिक ४६ रनको पारी खेलेका थिए । २६ बल सामना गरेका उनले २ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे । यस्तै मुम्बईका लागि कप्तान रोहित सर्माले ११ तथा क्विंटन डी कॉकले १९ रन बनाए भने ईशान किशनले १७ रनको योगदान गर्नु बाहेक अन्यले उलेख्य योगदान गर्न नसक्दा टिमले सम्मानजनक स्कोर मात्र खडा गरेको थियो ।
बलिङ्ग तर्फ हैदराबादको लागि सिद्दार्थ कौलले २ विकेट लिए भने कप्तान भुवनेश्वर कुमार , राशिद खान , मोहम्मद नाबी र सन्दिप सर्माले समान १/१ विकेट लिए ।
जित संगै मुम्बई ईण्डियन अहिले ५ खेलबाट ३ मा जित र २ मा हार व्यहोर्दै ६ अंकसहित नेट रनरेटमा पछि अंकतालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ । भने हैदराबाद पनि ५ खेलबाट ३ मा जित र २ मा हार व्यहोर्दै समान ६ अंकभएपनि नेट रनरेटमा माथि रहदै अहिले अंकतालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।
यता प्रतियोगिता अन्तर्गत आज आईतबार पनि दुई खेल हुदैछ । पहिलो खेलमा नेपालका युवा खेलाडी सन्दिप लामिछानेको टिम दिल्लीले बैंगलोरको सामना गर्नेछ । खेल नेपाली समय अनुसार दिउसो सवा ४ बजेपछि हुनेछ । यस्तै आजको दोस्रो खेलमा राजस्थान रोयल्सले कोलकाताको सामना गर्नेछ । यो खेल राति सवा ८ बजेपछि सुरु हुनेछ ।
Previous Postनेपाल को नजर अब बङ्लादेश तर्फ : जहाँ सन्दिप त्यहाँ हामी नेपाली
Next Postदिल्लीले आज अंकतालिकामा अन्तिममा रहेको बैंगलोरको सामना गर्ने : सन्दिप खेल्ने सम्भावना उच्च